अर्थ/व्यापार – Nepal Parikrama
Monday June 20, 2022 |
काठमाडौँ- रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको छ। सर्वसाधारणले आज बैशाख २८ गते जेठ ४ गते सम्म आवेदन दिन सकिने भएका छन्। यो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा ढिलोमा जेठ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले २७ लाख ३० हजार २५० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। निष्काशन गरिएको कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ५४ हजार ६०० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भन
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम भने १ अर्बमा सिमित
काठमाडौँ- साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से १३.३७ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार ०.५७ प्रतिशतले बढेर २३५७.२४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३.६१ अंकले बढेर ४४७.७६ विन्दुमा पुगेको छ। कारोबारको आधारमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र ग्रीन भेन्चर लिमिटेडको शेयर मुल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज १ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख ६५
शैक्षिक योग्यता नपुगेका महाप्रसाद अधिकारी कसरी बनेका थिए राष्ट्र बैंकको गर्भनर ?
यतिबेला राष्ट्र बैंकका निलम्वित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको विषयले बजार तातेको छ । कतिपयले निलम्बनलाई उनको व्यवहार अनुसार सरकारले जायज काम गरेको भनेका छन् भने कतिपयले स्वायत्त निकायको अधिकारी माथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भनि बुझेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले उनी माथि छानविन गर्न पाउँछ र छानविनका लागि समिति गठन भएलगत्तै उनी निलम्बनमा पर्छन् । अधिकारी निलम्बनको चर्चा चल्दै गर्दा उनी कानून अ
ग्रीन भेन्चर्सको आईपीओ आजदेखि खुल्यो, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन!
काठमाडौँ- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको छ। सर्वसाधारणले चैत्र ८ गते देखि ११ गते सम्म आवेदन दिन सकिने भएका छन्। यो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा ढिलोमा चैत्र २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले ३१ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। निष्काशन गरिएको कुल शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात ९३ हजार ७५० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भन
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० बर्षसम्म लिन बुझ्न नआएका/ दावी नपरेको रकम बैकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहिबार सुचना जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गर्ने र सो रकम बैकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिने जनाएको छ । सुचनामा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रक्रिया पुरा गरी यस बैंकको बैकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा
६३ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम ४ अर्ब माथि
काठमाडौँ- मंगलबार नेप्से ६३.०१ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार २.४१ प्रतिशतले बढेर २६७९.९५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स १५.८५ अंकले बढेर ५०३.७२ विन्दुमा पुगेको छ। आज ४ अर्ब ३२ करोड २ लाख ६९ हजार ८२७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू १४ करोड ७७ लाख माथिको शेयर कार
२५ सय अंकमा उक्लियो नेप्से, कारोबार रकमपनि साँढे ४ अर्बमाथि
काठमाडौँ- बुधबार नेप्से ९२.१६ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार ३.८२ प्रतिशतले बढेर २५०७.७० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स १४.७४ अंकले बढेर ४७७.२६ विन्दुमा पुगेको छ। आज ४ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख ३८ हजार १४३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेडको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू ६८ करोड ३४ लाख माथिको शेयर का
मंगलबार ५६.७३ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार भने २ अर्बमा सिमित
काठमाडौँ- मंगलबार नेप्से ५६.७३ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार २.४१ प्रतिशतले बढेर २४१५.५५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ११.३४ अंकले बढेर ४६२.५२ विन्दुमा पुगेको छ। आज २ अर्ब ३८ करोड ३२ लाख ५९ हजार ८४६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेडको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू १४ करोड ५८ लाख माथिको शेयर क
४.२३ अंकले घट्यो नेप्से, साढे ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौँ- बुधबार नेप्से परिसुचक ४.२३ अंकले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार ०.१७ प्रतिशतले घटेर २४१४.६२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.८९ अंकले घटेर ४५९.४१ विन्दुमा पुगेको छ। कारोबारको आधारमा सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मुल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । सबै भन्दा धेरै गुमाउनेमा नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसको शेयर मुल्यमा ५.३४
शेयर बजारमा गिरावट कायमै, साताको पहिलो दिन ८८.७३ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौँ- साताको पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचक ८८.७३ प्रतिशतले घटेको छ नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर बजार ३.६२ प्रतिशतले घटेर २३६१.२७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १५.१७ अंकले घटेर ४५०.०६ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबारको आधारमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मुल्य २ प्रतिशतले बढेको छ । सबै भन्दा धेरै गुमाउनेमा नयाँ सारथी लघु